Bodybulding : hanafika atsy Maorisy indray i Bigman sy i Antoine | NewsMada
Bodybulding : hanafika atsy Maorisy indray i Bigman sy i Antoine
Mitohy hatrany ny fifaninanana ho an’ireo bodybuilders malagasy. Rehefa avy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao tany Mongolie ny faran’ny herinandro lasa teo, i Bigman, nahazo ny laharana fahenina, teo amin’ny sokajy – 80 kg sy ny laharana fahafito, ho an’i Antoine, teo amin’ny – 95 kg, fantatra fa mety handray anjara amin’ny, «Grand Prix de l’Océan Indien 2017» indray ry zalahy. Fihaonana hatao atsy amin’ny Nosy Maorisy, ny 24 sy ny 25 novambra, ho avy izao.
Marihina fa efa nandray anjara tamin’izany, i Bigman, ary nahazo vokatra tsara hatrany ny tovolahy satria nitondra medaly nody hatrany. Ny andiany voalohany ihany no tsy afaka niatrika izany fifaninanana izany ny tenany. Anisan’ireo nanao ity “Grand Prix de l’Océan Indien”, ity koa i Antoine, ka nandrombaka ny medaly volafotsy, ny taona 2016, teo amin’ny sokajin-danja, 85 kg.
Nambaran’izy mirahalahy fa hahafahany manatsara ny zava-bitany ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany tany Mongolie, ary nahazoany traikefa maro, noho ny fifaneraserana, tamin’ireo mpikatroka efa kalaza eran-tany. Nisaotra ny filohan’ny federasiona ireto atleta ireto, nanampy ka nahafahany niatrika izany fihaonana eran-tany izany.